Igwe okwu ọhụrụ BeatsX kụrụ ahịa na etiti ọnwa Disemba | Esi m mac
N’ime isi okwu ikpeazụ nke afọ ahụ, Apple gosipụtara ụdị ekweisi ọhụrụ nke Apple ga-ebupụta na ahịa n’izu ndị na-abịa. Agbanyeghị na AirPods bụ earbuds nke dọtara nlebara anya, ọ bụghị naanị ha ka a ga-egosipụta, dịka ụlọ ọrụ ndị Cupertino webatara Beats Solo3 Wireless na BeatsX, ha nile site na mgbawa W1 ohuru, processor na-enye ohere ịbawanye ndụ batrị nke otu nke ukwu, na mgbakwunye na ikwe ka ijikwa ọtụtụ ọrụ nke ngwaọrụ naanị na aka. N'oge a akụkọ kachasị ọhụrụ metụtara AirPods na-ekwusi ike na ha ga-eru Apple Store na November 30.
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, AirPods nwere ike ọ gaghị abụ ihe ha na-achọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha chọrọ iji ha maka egwuregwu. Maka nke a, Apple malitere BeatsX, ekweisi ikuku na-ejide ya n'ime olu yana W1 chip na-ejikwa ya. Mana dịka AirPods, Apple ekwupụtaghị ụbọchị eme atụmatụ maka mmalite ya.. Mana dịka ndị na-ere ahịa B&H, nke kwuburu banyere mbido nke BlackBerry DTEK 60 ọhụrụ, na-azọrọ na Apple ga-ebido ekweisi ndị a na Disemba 16.
Ọ bụrụ na anyị gaa na ebe nrụọrụ weebụ Apple, anyị nwere ike ịhụ otu ọ na-egosi na ha ga-abata na ọdịda, ma na ụlọ ahịa anụ ahụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị gọọmentị, o yikarịrị ka ụbọchị nke onye na-ere ahịa a gosipụtara bụ nke Apple họpụtara iji malite BeatsX, ekweisi ga-adị ọcha ma ọ bụ oji na mbido ma nwee ọnụ ahịa nke euro 149,95. Nnwere onwe nke BeatsX bụ awa 8, yana ekele maka ọrụ mmanu ngwa ngwa nke W1 mgbawa nyere, na dị nnọọ 5 nkeji nke odori anyị pụrụ ịnụ ụtọ ha maka 2 awa agbasaghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Igwe okwu ọhụrụ BeatsX kụrụ ahịa na etiti ọnwa Disemba
Ntị! Etinyela Windows site na iji BootCamp na MacBook Pros ohuru